Haddii aad daaqadda xirato dharaartii oo dhan ogow caafimaadkaaga ayaad dhaawacday! | Radio Himilo
Home / Caafimaad / Haddii aad daaqadda xirato dharaartii oo dhan ogow caafimaadkaaga ayaad dhaawacday!
Haddii aad daaqadda xirato dharaartii oo dhan ogow caafimaadkaaga ayaad dhaawacday!
Muqdisho – Cilmi baaris cusub oo laga sameeyay jaamacadda Oregon ee dalka Mareykanka ayaa dabool qaaday in ku dedaaalidda nadaafadda daaqadaada iyo ka rogidda daaha dharaartiiyoo dhan ay kaa kaabayaan caafimaadkaaga.
Waa fal-gal togan ilayska ka imanaya cadceedda ee ku dhacaya hoygaaga ayay daraasadu leedahay, iyadoo iftiinkaas uu leynayo Bakteeriyada ku dhex faafda mugdiga.
Baarayaasha ayaa caddeeyay12% in bakteeriyada ay awood u leedahay iney ku dhex noolaato qolalka mugdiga ah ee aan loofurin ileyska cadceeda, waxyaabaha laga wel-welo oo ay daraasadaan sheegayso ayaa ah in bakteeriyadaan ay karto iney Taranto, haddiin aan lagu dedaalin ciribtirkeeda.
Cilmi barista waxa ay cuskaneysaa natiijooyin laga yaabay kaddib markii 90 maalmood goob lagu hayay nudayaal laga qaaday dhawr iyo toban qol oo mugdi ah.
Khubarada ayaa leh walxaha ka dhasha qolalka aan cadceedu qaban waa suuragal in laga qaado xanuunada dhimirka, balse geesta kale ayay tilmaameysa daraasadu waxa looga hortagi karo iney tahay keliya in ileyska qorraxda aan la moogaan.
Muddo qarniya ah ayuu aadamuhu magansanayay ileyska cadceedda isagoo iftiin ka raadinaya maalintii, hase ahaatee tan iyo inta la helay korontada baddelkii qorraxda waxa uu bini-aadamku doorbiday laambadda, balse tan la hubo ayaa ah in ileyska dabiicigga ahi uu iftiin keliya ahayn.
Previous: Paul Scholes: “Manchester United waxaa ka maqnaa dedaal”
Next: Dhibta Aflaamta cabsida ah ay ku hayaan da’yarta waa tanoo kale!